कोरोना भाइरस शायद कहिल्यै उन्मुलन नहुने डब्ल्यूएचओको चेतावनी – korea pati
May 14, 2020 May 14, 2020 Korea patiLeaveaComment on कोरोना भाइरस शायद कहिल्यै उन्मुलन नहुने डब्ल्यूएचओको चेतावनी
काठमाडाैं – कोरोना भाइरस कहिल्यै पनि अन्त्य नहुने सम्भावना रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले चेतावनी दिएको छ । बुधबारको ब्रिफिङ्गको क्रममा डब्लुएचओका आपतकालीन निर्देशन डा. माइक रायनले कोरोना भाइरस चाँडै अन्त्य हुने भन्दै भइरहेका भविष्यवाणी तर्फ इंगिद गर्दै यो भाइरस कहिल्यै अन्त्य नहुने वा रहिरहने सम्भावना देखिएको बताएका छन् ।
खोप पत्ता लागे पनि यो भाइरसलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि बृहत स्तरको प्रयासको खाँचो पर्ने उनले बताएका छन् । जेनेभामा भएको भर्च्युअल पत्रकार सम्मेलनमा डा. रायनले यो भाइरस हाम्रो समुदायका लागि अर्को महामारी जन्य भाइरसका रुपमा आएको र यो कहिल्यै नजाने वा अन्त्य नहुने सम्भावना रहेको बताए ।
यो कुरा चर्चामा ल्याउनु अत्यावश्यक पनि रहेको उनले भने । कोरोना भाइरस विरुद्ध हाल १०० सय भन्दा बढी सम्भावित खोपहरु निर्माणको चरणमा छन् । तर खोप भएर पनि उन्मुलन नभएका धेरै रोगहरु रहेकाले कोरोना भाइरस पनि त्यस्तै हुन सक्ने उनले चेतावनी दिएका हुन् ।